किन हुन्छ दाँत सिरिङ्ग हुने समस्या ?
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्य जीवनशैलीकिन हुन्छ दाँत सिरिङ्ग हुने समस्या ?
विराटनगर । केही चिसो खाँदा वा चिसोका कारण दाँत सिरिङ्ग हुने समस्या सामान्य हो । यो समस्या चिसो मौसममा मात्र नभई अरू बेला पनि देखापर्ने हुन्छ । दाँत किराले खाएको हुनाले, गिजा तल झरेर जरा खुला हुँदा, दाँतमा धेरै बलका साथ ब्रस गर्दा वा अन्य धेरै कारणले दाँत सिरिङ्ग हुनसक्छ । धेरै सुर्ती, सुपारीको सेवन गर्नेहरूमा दाँत खिइँदै जाने हुँदा पनि दाँत सिरिङ्ग हुने हुनसक्छ ।
जाडोमा विशेषगरी बिहानको समयमा पानी अत्यधिक चिसो हुन्छ । र, चिसो पानीको प्रयोगले दाँत सिरिङ्ग हुनसक्छ । सामान्य तापक्रममा भएको पानीले भने दाँत सिरिङ्ग गराउँने हुँदैन । दाँत किराले खाएपछि सुरुमा गुलियोको सेवनपछि सिरिङ्ग हुने लक्षण देखापर्छ । किराले खाएको दाँत भरेन भने समस्या बढ्दै जान्छ ।
दाँतको प्वाल बढ्दै गयो भने नशासम्म असर गर्न सक्छ । यो चरणमा उपचार गरिएन भने चिसोबाट सिरिङ्ग हुन्छ । र, यसपछि पनि उपचार गरिएन भने तातोबाट पनि दाँत सिरिङ्ग हुन थाल्छ र दुख्न थाल्छ । त्यस्तै, दाँत सफा गरेपछि पनि सिरिङ्ग हुने समस्या आउन सक्छ । तर, दाँत सफा गरेपछि एकरदुई दिन सिरिङ्ग हुनसक्छ ।
दाँत सफा गर्दा मिलेन भने पनि लामो समयसम्म दाँत सिरिङ्ग हुने समस्या हुनसक्छ । दाँत सिरिङ्ग हुने समस्या वेवास्ता गर्दा थप समस्या हुन सक्छ । जसकारण समयमै दाँतको परीक्षण र उपचार गर्न आवश्यक हुन्छ ।